Kulan lagu taageerayo shirka maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo oo ka dhacay Garowe (Sawiro) – Radio Daljir
Kulan lagu taageerayo shirka maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo oo ka dhacay Garowe (Sawiro)
Maarso 4, 2013 5:16 b 0
Garoowe, March, 04,2013?Kulankaan lagu taageerayay shirka maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa waxaa ka qeyb galay masuuliyiinta gobolka Nugaal, Kan degmada, xubin ka socday barlamaanka Puntland iyo ururada haweenka Gobolka Nugaal.
Kulankaas ayaa waxaa ?lagu taageerayey shirka maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ee dhawaan ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose.
Waxaana ?shirkaan sidoo kale ?looga soo horjeeday faragalin lagu sheegay in Dowladda? federalka Soomaaliya ay ku hayso dadaalka maamul u sameynta gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Nabadoonadii iyo qeybaha ?kale ee ?bulshadii ka qeyb gashay kulankaan ?ayaa sheegay in ay taageersanyihiin ?maamul u sameynta Gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Xildhibaan? Cismaan Dalmar Xaaji yuusuf oo kamid ah xildhibaanada barlamaanka Puntland oo soo xiray kulankaan ayaa Dowladda federalka Soomaliya ugu baaqey in ay ka shaqeyso sidii loo qancin lahaa dadka kasoo jeeda gobolada ?Jubbooyinka iyo Gedo kuwaas oo si wayn u danaynaya dhisitaanka maamul ay yeeshaan goboladaasi.
Xildhibaan (Dalmar) wuxuu kaloo ?sheegay in ay Puntland ?dhiiri galinayso?? maamulka u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ?isagoo dhinaca kale ka digey ?is qab qabsi iyo Khilaaf ka dhex abuurka shirka ka socda magaalada Kismaayo.
Qabashada kulankaan ayaa waxaa ay ?kusoo beegmaysaa xilli dhawaan magaalada Gaalkacyo uu ka dhacay kulan midkaan la mid ah ? oo lagu taageerayo ?maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo,
(Sawirro)Guddoomiyayaasha kooxaha heerka 1-aad ee Mudug oo doortay gudoomiyayaasha xiriirka kubadda cagta iyo kan kolayga
Dowladda Soomaaliya oo Mareykanka waydiisatay inuu xasaanad siiyo Gen. Cali Samatar